Ismaaciil Cumar Geelle oo Dhawaan booqanaya dalka Eritrea - Ceelhuur Online
Home > Wararka Dibadda > Ismaaciil Cumar Geelle oo Dhawaan booqanaya dalka Eritrea
July 31, 2018 admin478
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa la filayaa inuu dhawaan booqasho ku tago Magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea.
Jabuuti iyo Eritrea ayaa waxaa dhexmaray dagaal ku salaysan muran xuduudeed, waxaa Eritrea u muuqataa mid kasoo baxaysa go’doonkii siyaasadeed ee ay ku jirtay muddo badan. Madaxweynaha Soomaaliya iyo Ra’iisulwasaaraha itoobiya ayaa booqasho ku tagay dalkaan.
Sidoo kale Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa la filayaa isna uu safar ku tago Eritrea, Madaxdan ayaa halkaas u tagaya sidii loo soo celin lahaa xiriirkii diblumaasiyadeed ee Eritrea la laheyd wadamada ku yaala gobolka geeska afrika.
Eritrea ayaa waxaa saaran cunqabateyn uu ku soo rogay golaha ammaanka, iyadoo lagu eedeeyey in ay taageerto kooxaha nabadgalyo darada ka wada Soomaaliya, waxaana hadda la filayaa in cunaqabateyntaas laga qaado.
Sida muuqata dowladda Eritrea ayaa ku dadaaleysa sidii ay xiriirka diblomaasiyadeed ee dalalka deriska ah u soo celin lahayd.